नयाँ वर्ष अनि ग्रहचक्रमा सूर्यको उथलपुथल: यी ४ राशिलाई मिल्नेछ भाग्यको साथ ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/नयाँ वर्ष अनि ग्रहचक्रमा सूर्यको उथलपुथल: यी ४ राशिलाई मिल्नेछ भाग्यको साथ !
नयाँ वर्ष अनि ग्रहचक्रमा सूर्यको उथलपुथल: यी ४ राशिलाई मिल्नेछ भाग्यको साथ !
एजेन्सी- सूर्य देवलाई प्रत्यक्ष देवको दर्जा दिने गरिन्छ। सूर्य पृथ्वीमा हुने सम्पूर्ण अस्तित्वको कारक पनि मानिने गरिन्छ। सूर्यलाई नवग्रहको राजा पनि मान्ने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा सूर्यले गर्ने राशि परिवर्तनले हरेक राशिमा धेरै असर गर्ने गर्छ।१३ अप्रिलमा सूर्यले राशि परिवर्तन गर्दैछ। त्यस समय पश्चात सूर्यले राशिचक्रको एक परिक्रमा पूरा गरी नयाँ परिक्रमा शुरु गर्नेछ। मीन राशिबाट मेष राशिमा सूर्यले राशि परिवर्तन गरेसंगै विक्रम संवतको नयाँ वर्ष पनि शुरु हुनेछ।यस्तो हुँदा हरेक राशिमा फरक-फरक प्रभाव पर्ने हुन्छ। राशि अनुसार सूर्यको राशि परिवर्तनले सबै भन्दा धेरै निम्न राशिलाई लाभ मिल्नेछ । हेर्नुहोस् !